Somaliland ma u gali doontaa Russia booskii Sudan si uu u hirgelo qorshihii fashilmay? - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland ma u gali doontaa Russia booskii Sudan si uu u hirgelo...
Somaliland ma u gali doontaa Russia booskii Sudan si uu u hirgelo qorshihii fashilmay?
Hargeysa (Caasimada Online) – Sudan ayaa shaacisay Salaasadii hore inay dib u eegis ku samaynayso heshiiskii saldhiga badda ahaa ee Ruushka, midaasi oo fursad cusub siin karta Somaliland, sida lagu sheegay warbixin ay baahisay mareegta Modern Diplomacy.
Warbixinta mareegta ayaa waxaa diirada lagu saaray suurta-galnimada sareysa ee Ruushka uu qorshihiisa Sudan ugu wareejin doono Somaliland, oo ah dal ku dooda madax-banaani.
“Haddii’ba qorshaha Ruushka ee Sudan guul-darraysto, waxa hubaal ah in Ruushku ku qasbanyahay in uu aag baddasho weliba si dhakhso ah. Waxa aad loo odorosayaa in Ruushku daraaseyo faa’iidada iyo khasaaraha in uu saldhig lamid ah ka uu ka dhisan lahaa Sudan ka dhisto Somaliland. Horraantii sannadkii 2018 ayaa warar badan oo la isla dhex-marayay tilmaamayeen in Ruushku damacsanyahay in saldhig ka dhisto magaalo xeebeedda Saylac,” ayaa lagu yiri warbixintaas.
Ugu dambeyntiina waxaa lagu sheegay sida Ruushku dano siyaasadeed oo badan uga leedahay Itoobiya, Somaliland-na ay u tahay waddada u wanaagsan ee ku xiraysa Itoobiya, uguna istiraatijisan ee gobolka.